Qaramada Midoobay oo Sheegtay in Soomaaliya Ka Dhaceyn 77 Qarax Bishii Maarso – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Warbixin cusub oo ay soo saartay QM ayaa lagu sheegay in dalka Somalia uu sameynayo horumar dhanka maamulada ah balse uu wali wajahayo caqabado iyo rabshado ka dhashay xagjirnimada, argagixisada, khilaaf soo kala dhex gala dhinacyada hubeysan, xasilooni darro siyaasadeed iyo musuqmaasuq.
Antonio Guterres ayaa warbixintan kahor aqriyey golaha ammaanka ee QM waxa uuna sheegay in caqabadahan ay niyad jab ku yihiin wixii hore loo soo sameeyey dhaawacna u geysan karaan horumarka.
30 sano oo dagaalo sokeeye iyo weeraro xagjirnimo ah kadib Somalia waxa sanadkii 2012 laga aas’aasay dowlad aan kumeel gaar aheen, tan iyo muddadaasna waxa ay ka shaqeyneysaa dib usoo celinta xasiloonida Somalida.
Antonio Guterres waxa uu sheegay xaaladda Somalia wali inaysan aheyn mid degan waxa uuna warbixintiisa kaga hadlay xaaladda amni ee Somalia muddadii u dhexeysay bishii December ee sanadkii hore ilaa bishan May ee sanadkan 2019.
Dagaalyahanada Al Shabab oo xiriir dhow laleh urur weynaha Al Qaeda ayaa wali wada weerarada ay la beegsanayaan xarumaha dowladda, Mas’uuliyiinta dowladda, saraakiisha ammaanka iyo goobaha caanka ah sida maqaaxiyaha hotel-ada ayuu yiri Antonio Guterres.
Mr Guterres ayaa sheegay in bilihii lasoo dhaafay ee March iyo April ay kordheen weerarada ka dhaca Muqdisho, waxaana sida uu sheegay weeraradaas ku jira qaraxyada sida maalinlaha ah u dhaca.
Bishii March ee sanadkan ayuu sheegay Antonio Guterres in Somalia ay ka dhaceen 77 weerar, waxa uuna tilmaamay in ay tahay bishii ay dhaceen weeraradii ugu badnaa ee dhaca bil gudaheed tan iyo sanadkii 2016.
Antonio Guterres waxa uu intaas raaciyey inay kordheen weerarada madaafiicda ah ee ay Al Shabab la beegsadaan goobaha strategy-ga ah, waxa uuna sheegay in Shabaab wali ay wadaan fulinta weerarada loo adeegsado gawaarida lagu soo xiray waxyaabaha qarxa.
Isla waqtigaas, xoghayuhu waxa uu sheegay in la kordhiyey howlgallada dhanka ammaanka ah, tiro badan oo weeraro ahna lala beegsaday saldhigyo ay ku tababartaan Al Shabab.
Marka laga soo tago qatarta dhanka amniga ah Antonio Guterres waxa uu sheegay in shacabka Somaliyeed ay wajahayaan faqri iyo cunto la’aan.
Waxa uu sheegay in qiyaas uu bankiga adduunka sameeyey oo lagu eegayey faqriga iyo cunto la’aanta lagu ogaaday in 77% shacabka soomaaliyeed ay ku nool yihiin wax ka yar $1.90 maalintii.